Mgbidi Ụlọ Ahịa Elu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mgbidi Ụlọ Ahịa Elu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Mgbidi Ụlọ Ahịa Elu)
Mgbidi na-etinye ihe nkiri infrared eletriki maka sauna
Mgbidi na-ekpuchi ihe nkiri infrared eletriki maka sauna bụ ụdị ihe ndozi nke sauna. Ụlọ sauna nwere ike itinye na okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ .Ọ na-adabere na ike na oke ọkụ ị chọrọ Atụmatụ Ngwaahịa 1Shineke --------- Ọ na-adịrị gị mfe iji obi gị ụtọ 2Warm ------ Na okpomọkụ dị mma ka ị nwee ezigbo ụbọchị. Ọ dị ka ịsa...
Ụlọ ime ụlọ na-emepụta Greenhouse Hydroponic Systems
Onyinye Ụlọ Ahịa nke enweghị atụ
Onyinye Ụlọ Ahịa nke enweghị atụ Mee ka ahụmahụ ị na-ahụ Ị chọrọ ịcha na mmiri na-enweghị mmiri ọ bụla? Ị ga-anwale onye na-eme anyị maka enyo na-enyo enyo. Mee ka enyo anyị na-agbanye n'azụ mirror, gbanye ọkụ eletrik na ị nwere ike ịnụ ụtọ ịsa ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Enyo enyo n'enweghị ihe ọ bụla...
Enwunye eletrik Defogger maka Ụlọ Ntaneto Steam
Enwunye eletrik Defogger maka Ụlọ Ntaneto Steam P roduct Description Na enyo n'enweghị ntụpọ dịka akụkụ nke ụlọ, ị gaghịzi ehichapụ gosipụtara anya mgbe mmiri na-ekpo ọkụ ma hapụ streaks na ha dịka nsonaazụ. Ịwụnye usoro ntanetị ime ụlọ ịwụ na-eme ka ụzọ dị mfe ma dị irè iji mee ka ụtụtụ gị dịkwuo mma. Ndị injinia...
Ụlọ mmiri na snow na-ekpo ọkụ maka ọwa mmiri
elu saa mbara igwe dị ọkụ na-ekpo ọkụ
Ụlọ ọrụ na-ere ihe na-emepụta ihe maka Ụlọ ọrụ Snowmobile
Nkọwapụta ngwaahịa Xinghongchang na-emepụta ndị na-ekpo ọkụ maka ọgba tum tum. motobike.snowblower.snowmobile na ụgbọ ala niile (ATV). Site na igwe kpo oku kpochapu nke oma, o di mfe igbunye ihe na-ekpo oku na ogwe aka. Ọ na-egbochi aka ịmị na-agbasi ike ma na-enwekwu nkasi obi nye onye na-agba ya. Site na mmiri ọkụ...
Sauna Ụlọ Ifuru infrared
A na-ejikarị ya saa okpomọkụ nke infrared Saa, Infrared Sauna Dome, Ụlọ elu Yoga nke dị elu, ọwa mmiri na-ekpo ọkụ wdg. ihe nkiri ikpo ọkụ, ntutu anya na-ekpo ọkụ ọkụ. Sauna Room infrared okpomọkụ 1. Product: Far Infrared Sauna Room heat film 2. Ngwaahịa na-eji carbon emepụta, na ọrụ Far Infrared. 3. Enwere ike ịme...
Onyinye onyinye Krismas kachasị mma maka ahịa
Ọkụ ọhụrụ anyị nwere ike ịfụgharị na USB nwere ike ịdị elu, ụlọ ahụ nwere ikikere aka nri. N'adịghị ka ọkụ ndị ọzọ aka, Ọka aka anyị anaghị achọ ka ọ dị mma. Na iziputa USB , ọkụ aka na-ejide ya maka izu ole na ole na-achọpụta na ọ dị njikere mgbe ị nwetara . Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnụ ọkụ n'obi ọbụna...
Ụlọ na-egbochi na-eme ka okpukpu kpo ọkụ na EC
Mgbochi ụlọ na-ada ụra ọkụ Na-egbochi ihe ize ndụ nke ụlọ dara, na-achọpụta na ụlọ nwere ike ịnọgide na-emeghe ọbụna n'oge oké ifufe snow kachasị njọ.Nọpụ ụgwọ na nkwụsịtụ nke ịkwado ụlọ dị ugbu a megide ize ndụ nke ịmalite ime snow, mgbe a na-ewu ụlọ ọhụrụ na - Nkọwapụta Nkwụsị mbụ: 798-976Ω, nkwụsị aka 878Ω Ike:...
Ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ na PTC na-ekpo ọkụ ihe arụ
Nkọwapụta ngwaahịa A na-eji nhazi ụlọ mposi eme ihe. Ihe dị mma ma dị mma maka ụlọ mposi chacha. Site na ihe nkiri kpochapu anyị nke ọma, ọ na-enye gị ọkụ n'obi na oyi na-akpaghị aka. Maka na ọ na - achịkwa onwe ya, na - achịkwa, ọ dịghị mkpa maka thermostat . Ọ bụ "ụzọ ọhụrụ nke kpo oku." Jiri ike karịa...
elu igwe elu ụlọ-debere ichota Mee N'onwe Gị ọkụ ihe nkiri
A na-emekarị igwe ọkụ na-ekpocha ihe nkiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ maka mmiri, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka okporo ụzọ. ekpuchi, okporo ụzọ wdg. Ọ dị mfe iji wụnye na ịkwaga .Ọ dị mfe ịsacha ma dị mkpụmkpụ. Ị bụ ọkachamara na onye ndú Chinese na-emepụta ihe nkiri okpomọkụ, anyị...
Mgbidi Ụlọ Ahịa Elu Defogger Ụlọ Ahịa nke Ahịa Ụlọ ihe dị ọkụ Ogwe Ụlọ Iyi Elu ọkụ Defogger nke Ụlọ Ahịa ahaziri ahazi 12v Ụlọ ihe nkiri ụgbọala Ogige Ụlọ Iche Na-ekpo ọkụ Ụlọ Nkịta Ụlọ Nkịta